Fanafihana mpitsara : valifaty fa tsy fandrobana ny nataon’ireo jiolahy | NewsMada
Fanafihana mpitsara : valifaty fa tsy fandrobana ny nataon’ireo jiolahy
Nilaza ny avy amin’ny minisiteran’ny Fitsarana fa valifaty no nataon’ireo nanafika ny filoha lefitry ny fitsarana ambaratonga voalohany ao Fianarantsoa, ny alin’ny 14 avrily teo, fa tsy fanafihana tsotra. Notifirin’ireo mpanafika izy ka voatifitra teo amin’ny lohany. Nafindra aty Antananarivo (Evasan) izy ary efa mahazo fitsaboana amin’ny hopitaly lehibe iray eto an-drenivohitra. Tsy misy atahorana ny ainy.
“Efa nandray andraikitra ny manam-pahefana tany an-toerana ka nahafantarana fa efa nisy olon-dratsy nanafika fivarotana teo akaikin’ny tranon’ity mpitsara ity ny andro voalohany. Nisakana izany ity mpitsara ity ka nandamoaka ny fanafihana”, hoy ny fanazavana.
Rehefa nanafika ny tranon’ity mpitsara ity kosa ireo olon-dratsy ny ampitson’iny, fantatra fa tsy halatra no tena anton-dian’izy ireo fa valifaty satria nopotehiny ny ankamaroan’ny entana tao an-trano ka izay voarain’ny tanany ihany no nalain’izy ireo ary nitifitra ilay mpitsara no tena anton-dian’izy ireo.
Manoloana izany toe-draharaha izany, namangy ity mpitsara ity tao amin’ny hopitaly Ramatoa RASOLO Elise, minisitry ny Fitsarana, niaraka tamin’ireo mpiara-miasa aminy akaiky nampiseho firaisan-kina tamin’ity mpitsara ity ary nankahery azy sy ny fianakaviany. “Manameloka tanteraka ny fanafihana ity mpiasan’ny fitsarana ity ramatoa minisitra ary nanome toky fa atao izay rehetra ahitana ny marina ary anasaziana mafy ireo nahavanon-doza. Mendri-piderana ny fahasahian’ity mpitsara ity niaro ny mpiara-monina aminy”, hoy ny fanamafisana. Andrasana, araka izany, izay vokatry ny fanadihadiana satria voalaza fa efa misy fantatra ireo olon-datsy.